port လုံးဝမပါတဲ့ iPhone တွေရဲ့အသက်ဖြစ်လာမယ့် iOS feature လေးပေါက်ကြားလာ | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone port လုံးဝမပါတဲ့ iPhone တွေရဲ့အသက်ဖြစ်လာမယ့် iOS feature လေးပေါက်ကြားလာ
port လုံးဝမပါတဲ့ iPhone တွေရဲ့အသက်ဖြစ်လာမယ့် iOS feature လေးပေါက်ကြားလာ
iOS 13.4 ကတော့ iOS 14 မတိုင်ခင်မှာ ကြီးမားတဲ့update တစ်ခုလာဖြစ်လာမယ့်သဘောရှိနေပါတယ်။ iOS 13.4 ရဲ့ ပထမဆုံးbeta လေးမှာ CarKey လို့ခေါ်တဲ့ API အသစ်လေးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး iPhone နဲ့ Apple Watch သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ကားကို unlock လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် feature လေးကို သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် တတိယမြောက် beta ထွက်လာချိန်မှာ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ feature လေးကို ထပ်တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်မြင်တွေ့ထားတဲ့ feature လေးကတော့ iOS အတွက် online recovery feature လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ firmware တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ Mac ဒါမှမဟုတ် PC တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသာ တင်လို့ရခဲ့တာပါ။ အရင်တုန်းက ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၂၀၂၀ရောက်လာချိန်မှာတော့ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။
Apple Watch နဲ့ HomePod သုံးစွဲသူတွေဆိုရင် တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ သူတို့အတွက် နောက်ထပ်device နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ တစ်ခုခုများ အဆင်မပြေရင် Genius Bar နဲ့ချိတ်ဖို့သာ ပြင်ပေတော့ပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ OS Recovery feature လေးက အသက်ကယ်ဆေးဖြစ်လာတာပါ။ iPhone, iPad, Apple Device တွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘဲ အလွယ်တကူ firmware တင်နိုင်တော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိမှာတော့ အဲဒီfeature ကို မရနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ထင်သလောက်ကတော့ macOS Internet Recovery feature လေးလိုမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီ feature လေးဟာ Apple သုံးစွဲသူတိုင်း ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုကြမယ့်feature လေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် နောက်ပိုင်းiPhone တွေမှာ port မပါလောက်တော့ဘူးလို့လည်း ယူဆလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဖုန်းမှာ port ထည့်ပေးရခြင်းက အားသွင်းဖို့နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် wireless charging, online recovery feature တွေက port ထည့်စရာမလိုအောင် ဖန်တီးပေးပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။
iPhone 12 အသစ်မှာတော့ 802. 11ay Wi-Fi standart ပါဝင်လာမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။ အိမ်မှာဝိုင်ဖိုင်ရှိတာနဲ့ OS တစ်ခုလုံးကို on air ရတော့မှာပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့ recovery လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။
iOS 13.4 ကေတာ့ iOS 14 မတိုင္ခင္မွာ ႀကီးမားတဲ့update တစ္ခုလာျဖစ္လာမယ့္သေဘာရွိေနပါတယ္။ iOS 13.4 ရဲ႕ ပထမဆုံးbeta ေလးမွာ CarKey လို႔ေခၚတဲ့ API အသစ္ေလးကိုေတြ႕ခဲ့ရၿပီး iPhone နဲ႔ Apple Watch သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ကားကို unlock လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ feature ေလးကို သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ တတိယေျမာက္ beta ထြက္လာခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ feature ေလးကို ထပ္ေတြ႕လိုက္ရျပန္ပါတယ္။
အခုတစ္ေခါက္ျမင္ေတြ႕ထားတဲ့ feature ေလးကေတာ့ iOS အတြက္ online recovery feature ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ firmware တင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ Mac ဒါမွမဟုတ္ PC တစ္လုံးနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွသာ တင္လို႔ရခဲ့တာပါ။ အရင္တုန္းက ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ပုံမွန္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ၂၀၂၀ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။
Apple Watch နဲ႔ HomePod သုံးစြဲသူေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္device နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ဆိုတာ အဆင္မေျပလွပါဘူး။ တစ္ခုခုမ်ား အဆင္မေျပရင္ Genius Bar နဲ႔ခ်ိတ္ဖို႔သာ ျပင္ေပေတာ့ပဲ။
ဒါေၾကာင့္ပဲ OS Recovery feature ေလးက အသက္ကယ္ေဆးျဖစ္လာတာပါ။ iPhone, iPad, Apple Device ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ firmware တင္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိမွာေတာ့ အဲဒီfeature ကို မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ထင္သေလာက္ကေတာ့ macOS Internet Recovery feature ေလးလိုမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ဒီ feature ေလးဟာ Apple သုံးစြဲသူတိုင္း ဝမ္းသာအားရႀကိဳဆိုၾကမယ့္feature ေလးတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ပိုင္းiPhone ေတြမွာ port မပါေလာက္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း ယူဆလို႔ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဖုန္းမွာ port ထည့္ေပးရျခင္းက အားသြင္းဖို႔နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ wireless charging, online recovery feature ေတြက port ထည့္စရာမလိုေအာင္ ဖန္တီးေပးၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။
iPhone 12 အသစ္မွာေတာ့ 802. 11ay Wi-Fi standart ပါဝင္လာမယ္လို႔ မွန္းထားပါတယ္။ အိမ္မွာဝိုင္ဖိုင္ရွိတာနဲ႔ OS တစ္ခုလုံးကို on air ရေတာ့မွာပါ။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျမင့္နဲ႔ recovery လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။
Previous articleကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသနည်းကြော်ငြာများကို ban လိုက်တဲ့ Facebook
Next articlelightning-fast အားသွင်းစနစ်အသစ်ပါဝင်လာနိုင်ချေရှိနေတဲ့ iPhone 12